South Africa – Marabi
July 19, 2021	South Africa 0
South Africa braced on Monday for the prospect of participating in the first test against the British and Irish Lions without their inspiring leader Siya Kolisi, with the Springboks considering replacement options for the captain position. After spending the last 10 days in isolation after testing positive for Covid-19, Kolisi …
July 18, 2021	South Africa 0
A stroll through a green and peaceful suburb of regional New South Wales is, for these South African nationals, a far cry from the violence that has unfolded in their home country. The expat group finds solace with each other as their loved ones are caught up in the unrest, …
South Africa cleans up after violent protests rock nation | national
Clean-up continues in South Africa after violent unrest was stemmed by military intervention, with major roads reopening in KwaZulu-Natal and Gauteng provinces. At least 212 people have died in a week of chaos, hundreds of shops have been looted and key infrastructure damaged or destroyed, potentially slowing South Africa’s recovery …
July 16, 2021	South Africa 0
The arrest of former South African President Jacob Zuma this month sparked looting and violence in the country’s two most populous provinces amid a record spate of Covid-19 infections. Current President Cyril Ramaphosa said the unrest was the result of an orchestrated campaign to spark an insurgency against South Africa’s …
July 15, 2021	South Africa 0
JOHANNESBURG, July 14 (Reuters) – After losing 53 cars in xenophobic attacks in South Africa in 2019, Johannesburg car dealership owner Okey Uchendu never thought he would see his business destroyed again by civil unrest in less than two years. Already facing the impact of COVID-19 on the economy, Uchendu …
INSIGHT-South African farmers dream of drought cover on climate frontline
July 14, 2021	South Africa 0
* A fraction of South African farmers have drought insurance * Climate change leads to longer and harder periods of drought * Insurers say they are unable to cover their risks * The new state subsidy plan aims to fix the failing system By Emma Rumney JOHANNESBURG, July 14 (Reuters) …